Shiinaha Pigment Printing Agent Binding LH-3211 saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yiman Lanhua
LH-3211 waa nooc ka mid ah polymer molecular sare oo gaar ah.Waxay ku habboon tahay daabacaadda midabka muraayadda fidsan, shaashadda wareegta, platen, goynta iyo dhar aan tol lahayn, midabaynta midabka ama loo isticmaalo isku-darka koollada adhiga.
-LH-3211 waa nooc ka mid ah polymer molecular sare oo gaar ah.Waxay ku habboon tahay daabacaadda midabka muraayadda fidsan, shaashadda wareegta, platen, goynta iyo dhar aan tol lahayn, midabaynta midabka ama loo isticmaalo isku-darka koollada adhiga.
Midab dhalaalaya iyo midab buuxa oo soo saarid, waafaqid wanaagsan oo dhumucdiisuna tahay.
Xakamaynta jilicsan ee dharka daabacan.Dhaqdhaqaaqa cadayashada wanaagsan iyo xajinta xoqidda.
Ku xasiloon heerkulbeegga iyo walaaqaya, emulsion-ku wuxuu leeyahay waxqabad kala firdhisan oo wanaagsan, wuxuu iska ilaalin karaa xannibista shaashadda daabacaadda.
Isku-dubbarid isku-tallaabta ah, hanti-samaynta filim-samaynta wanaagsan, oo aan huruud lahayn.
Aan ku dheggan rollerka marka loo isticmaalo dheeha midabka.
Waxa loo isticmaali karaa dharka ilmaha.
Muuqashada Dareere caddaan ah oo buluug ah
Qiimaha pH (Stoste) 7.0-9.0
Waxyaabo adag (%) 35.0-37.0
1. Recipe Daabacaadda Midabka:
Biyo ama z% kale
2. Qulqulka booska: Diyaarinta koollada → Daabacaadda shaashad wareeg ah ama fidsan → Qallajin → Daawaynta (120-140 ℃, 1.5-3 min)
Xusuusin: Habka faahfaahsan waa in lagu hagaajiyaa iyadoo la raacayo isku dayada hordhaca ah.
1. Kiimikada waa in si gaar ah loogu daraa marka la diyaarinayo koollada daabacaadda, ka dibna si siman u walaaq ka hor intaan la isticmaalin.
2. Si adag ugu tali isticmaalka biyaha jilicsan, haddii aan biyo jilicsan la helin, xasiloonida waxay u baahan tahay in la tijaabiyo ka hor inta aan la samaynin koollada.
3. Si loo hubiyo badbaadada, waa inaad dib u eegtaa xaashiyada xogta badbaadada agabka ka hor inta aanad alaabtan ku hoos isticmaalin shuruudo gaar ah.MSDS waxa laga heli karaa Lanhua.Kahor intaadan la tacaalin alaabada kale ee lagu xusay qoraalka, waa inaad heshaa macluumaadka badbaadada alaabta oo aad qaaddo tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad u hubiso badbaadada isticmaalka.
Shabagga durbaanka caaga ah 120 kg, waxaa lagu kaydin karaa 6 bilood heerkulka qolka iyo xaaladda hermetic iyada oo aan la helin iftiinka qorraxda.Si loo hubiyo in tayada badeecada la ilaaliyo, fadlan hubi muddada uu shaqaynayo badeecada, waana in la isticmaalo kahor ansaxnimada.Weelka waa in si adag loo xiraa marka aan la isticmaalin.Waa in la kaydiyaa iyada oo aan la soo gaadhin kuleyl aad u daran iyo xaalado qabow oo daba dheeraada, waxa laga yaabaa in ay keento qolof aan laga noqon karin marka uu heerkul sare gaadho.deegaanka.Haddii alaabtu barafaysan tahay heerkul aad u hooseeya, ku dhalaali xaalad diiran, si siman u walaaq oo samee tijaabooyin si aad u hubiso waxqabadka ka hor isticmaalka.
Talooyinka kor ku xusan waxay ku salaysan yihiin daraasado dhammaystiran iyo waayo-aragnimo lagu sameeyay dhammaystir wax ku ool ah.Si kastaba ha ahaatee, waa bilaa mas'uuliyad ku saabsan xuquuqda lahaanshaha ee dhinacyada saddexaad iyo sharciyada shisheeye.Isticmaaluhu waa inuu is tijaabiyaa in badeecada iyo codsigu ay ku habboon yihiin ujeedooyinkiisa gaarka ah iyo in kale.
Annagu, waxa ugu sarreeya, mas'uul kama nihin goobaha iyo hababka codsiga oo aynaan qoraal ahaan u dejin.
Talooyinka calaamadaynta xeerarka iyo tillaabooyinka ilaalinta waxaa laga soo qaadan karaa xaashida xogta badbaadada ee kala duwan.
Binder Paste Pigment
Binder Printing Pigment
Daabacaadda dhejiska dhejiska
Dheejinta Xakamaynta, Midabka Heerkulka Sare, Kaaliyeyaasha Kiimikada, Wakiilka Saabuunta Acrylic, Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta, Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah,